‘दोहोर्‍याउन सल्लाह आयो, अबको कार्यकालमा नयाँ भवन बनाउँछौँ’
मुख्य पृष्ठअन्तर्वार्ता स्वास्थ्य‘दोहोर्‍याउन सल्लाह आयो, अबको कार्यकालमा नयाँ भवन बनाउँछौँ’
विराटनगर/नेपाल चिकित्सक सङ्घ कोसी शाखाको नयाँ नेतृत्वका लागि माघ ४–५ गते निर्वाचन हुँदैछ । नयाँ नेतृत्वका लागि वर्तमान अध्यक्ष डाक्टर फरवार्ड सिलवाल र डाक्टर कैशाल श्रेष्ठबीचको प्यानल प्रतिस्पर्धा गर्दैछ ।
दुवै समूहले आ–आफ्नो प्यानल बनाएर चुनाबी अभियानमा होमिएका छन् । दोस्रो पटक नेतृत्वका लगि चुनावी मैदानमा रहेका डाक्टर सिलवालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
डा. फरवार्ड सिलवाल
चिकित्सक सङ्घको नेतृत्वले निरन्तर काम गरिरहेको छ । १५ भदौ २०७३ बाट नेपाल चिकित्सक सङ्घ, कोसी शाखाको नवकार्यसमितिमा निर्वाचित भएसँगै नेपाल चिकित्सक सङ्घ, कोसी शाखाले चिकित्सकको हकहितका लागि र उनीहरूमा आइपर्ने हरेक समस्याका लागि निरन्तर र अथक पहल गरिरहेको छ ।
चिकित्सक डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षाका लागि निरन्तर विरोधका कार्यक्रमलगायतका पहलकदमी गरिरहेका छौँ । चिकित्सको निरन्तर क्षमता वृद्धिका लागि विभिन्न ट्रेनिङ तथा बर्कसप, विभिन्न रिसर्च ग्रान्ट, सिएमएलगायतका कार्यक्रमका ध्यान दिएका छौँ । साथै, जनचेतना फैलाउने तथा रक्तदान कार्यक्रमहरू पनि गरिएको छ ।
चिकित्सकहरूको हरेक समस्यामा सहजीकरण गर्नका सचिवालय निर्माण गर्नुका साथै, नेपाल चिकित्सक सङ्घ, कोसी शाखाको भवन मर्मत तथा शौचालय निर्माण पनि गरिएको छ । सङ्घका आजीवन सदस्यलाई बिमा र बिमा दावी भुक्तानीका लागि सहज परिस्थिति सिर्जना गरिएको छ । विश्वभरि महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोभिड १९ सङ्क्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सुरुवातदेखि नै परामर्श र पहलकदमी गरिएको थियो ।
सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र सङ्क्रमितको उपचारमा खटिने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई सहजरुपमा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री उपलब्धता, बिमा र भत्ताको व्यवस्थाका लागि निरन्तर वकालत गर्नुका साथै लकडाउनमा अस्पताल आवजजावत गर्दा अफ्ठ्यारो हुन नदिन सङ्घको लोगो अङ्कित डाक्टर लेखेको ज्याकेट चिकित्सकहरूलाई उपलब्ध गराइएको थियो ।
सङ्घले चिकित्सकहरूलाई मास्क र सेनिटाइजर प्रदान गर्ने, विराटनगर महानगरपालिकाका लागि होम आइसोलेसन मापदण्ड निर्माण गर्नुका साथै विराटनगर महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा फोन कन्सल्टेसन सेवा सञ्चालनलगायतका विभिन्न कार्यहरू गरिएको थियो ।
यस्ता छन् चुनाबी प्रतिबद्धता
चिकित्सकहरूको पेशागत हकहित, समुचित वृत्ति विकास र सुरक्षाका लागि निरन्तर कटिबद्ध रहने, चिकित्सा शिक्षा उत्तीर्ण गरी चिकित्सकीय पेशामा प्रवेश गर्नुहुने नवचिकित्सकहरूको पेशागत विकासका लागि रोजगारीको व्यवस्था तथा तालिममा सहभागी गराउनका लागि सदैव समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न प्रतिबद्धता रहेको छ ।
सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा विद्यमान रहेको चिकित्सकहरूको न्यून दरबन्दी, करार तथा ज्यालादारीको नाममा भइरहेको श्रम शोषणको विषयमा विशेष पहल गरी ठोस कदम चालिने र चिकित्सकहरूको सहजता र हरेक प्रशासनिक कार्यमा सहयोग गर्नेछौँ ।
नेपाल चिकित्सक सङ्घ कोसी शाखाको नयाँ भवन निर्माण गरिने तथा भवन निर्मानमा योगदान गर्ने सम्पूर्ण चिकित्सकको नाम भवनमा शिलालेख गरिने छ । विभिन्न बैङ्क तथा बित्तीय संस्थासँग सम्बन्ध स्थापना गरी चिकित्सकलाई सहुलियत दरमा ऋणलगायत सम्पूर्ण कार्यहरूका लागि सुरुवात भएका कार्यहरूलाई निरन्तर दिनेछौँ । साथै, नेपाल चिकित्सक सङ्घको राष्ट्रिय सम्मेलन विराटनगरमा आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता छौँ ।
दोहोर्‍याउन सल्लाह धेरै आयो
धेरैले कार्यकाल दोहोर्‍याउन सल्लाह दिए । फागुनमै सकिने कार्यकाल कोभिडका कारणले लम्बिएको हो । लकडाउन भएपछि केही कामहरू स्थगित भएका थिए । त्यसलाई पूरा गर्नु छ ।
कार्यकाल सकिनु एक–दुई वर्ष अगाडीदेखि नै पुनः कार्यकाल दोहोर्‍याउन सल्लाह दिँदै आउनु भएको छ । सुरुमा फेरि पनि कार्यकाल दोहर्‍याउँछु जस्तो लागेको थिएन तर, अब पुनः केही टार्गेट लिएर यसलाई हासिल गर्न सकिए राम्रो हुन्छ सोची कार्यकाल दोह्रोर्‍याउन लागेको हो ।
चिकित्सक सङ्घको भवनको अवस्था थप जीर्ण हुँदै गएको छ । सङ्घको आफ्नै जग्गा भएको कारण नयाँ भवनको निर्माण गर्ने पहल सुरु गरिएको छ ।
सरकारबाट पनि केही सहयोग पाइने तथा विभिन्न निकायहरूसँग कुरा गरेर लाइब्रेरीसहितको पाँचदेखि छ तलाको सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गर्ने डिपिआर सार्वजनिक गरिसकेका छौँ ।
अबको कार्यकालमा भवन निर्माणको काम सकाउनुका साथै केही नयाँ टार्गेटको साथ अगाडि बढ्ने सोच राखेका छौँ । चिकित्सकहरूको हकहितका लागि लड्ने, विभिन्न ट्रेनिङ तथा जनचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेलगायतका अन्य कामहरू हुने क्रम जारी नै रहने छ ।
सङ्घमा धेरै चिकित्सक आबद्ध छन्
धेरै सङ्ख्यामा चिकित्सकहरू सङ्घमा आबद्ध छन् । केही डाक्टरहरू विदेश जानु भयो होला वा कत्तिको सरुवा भयो होला तर, धेरै चिकित्सक सङ्घमा आबद्ध छन् ।
हाल लगभग नौ सयभन्दा बढीको हाराहारीमा चिकित्सकहरू सङ्घमा आबद्ध छन् । पहिलेको भन्दा धेरै डाक्टरहरू बढेका छन् र अधिकांश संघका सदस्य पनि हुन् । धेरै कम डाक्टरहरू सदस्य हुनबाट छुटेका छन् । यसपालि पनि ती सय जति सदस्य थपिएका छन् । र, आगामी दिनहरूमा धेरै चिकित्सकहरू सङ्घमा आबद्ध हुँदै जाने छन् ।
सक्रिय नरहेको हल्ला गलत
कोभिडका कारणले केही काम रोकिएको अवश्य होला तर, सङ्घ एकदम सक्रिय रहेको छ । सक्रियताको हिसाबमा नेपाल चिकित्सक सङ्घको दोस्रो नम्बरमा कोसी शाखा पर्छ ।
नेपाल चिकित्सक सङ्घको शाखाहरूमध्ये केन्द्रीय समितिले पूरै नेपालभरि हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछिको दोस्रो सक्रिय शाखा भनेको नेपाल चिकित्सक सङ्घ कोसी शाखा हो । त्यसैले, सङ्घ सक्रिय रहेको छ । सङ्घले अन्य गतिविधिबाहेक जहिले पनि डाक्टरहरूको हकहितका लागि लडिरहेको, विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेको साथै डाक्टरहरूलाई अपलिफ्ट गर्नका लागि ट्रेनिङ र वर्कसपहरू सञ्चालन गरिरहेको छ ।
अबको तीन वर्षमा सङ्घको कार्यभार बढ्ने देखिन्छ । नयाँ चिकित्सकहरू थपिँदै जाँदा सङ्घले थप सशक्त भएर अगाडि बढ्दै जानुपर्ने हुन्छ । सङ्घले आफ्ना सदस्य चिकित्सकहरूको हकहितका लागि लड्नु नै यसको मुख्य एजेन्डा हो । चिकित्सकहरूको तलब भत्ता तथा सुविधाका लागि बोल्ने तथा चिकित्सकको निरन्तर क्षमता वृद्धिका लागि विभिन्न ट्रेनिङ तथा वर्कसप, विभिन्न रिसर्च ग्रान्ट, सिएमए लगायतका कार्यक्रम आयोजना गराइने छ ।
जनचेतनाका कार्यक्रम, जर्नल तथा रिसर्च पेपरहरू प्रकाशन गर्ने काम, एकेडेमिकतिर पनि परिवर्तन गर्नेछौँ । सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा विद्यमान रहेको चिकित्सकहरूको न्यून दरबन्दी, करार तथा ज्यालादारीको नाममा भइरहेको श्रमशोषणको विषयमा विशेष पहल गरी ठोस कदम चालिने छ ।
प्रस्तुति : अङ्किता ताम्राकार
मधुमेह भएकाले कर्न फ्लेक्सको सेवन गर्नु नराम्रो विकल्प हुनसक्ने
नेपालमै पहिलोपटक नयाँ प्रविधिबाट ‘अल इन्साइड’ एसिएल रिकन्सट्रक्सन सर्जरी विराटमा